Qarax ka dhacay Jowhar iyo Sarkaal ciidan oo shil gaari ugu dh... | Universal Somali TV
Qarax ka dhacay Jowhar iyo Sarkaal ciidan oo shil gaari ugu dhintay duleedka Jowhar.
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee Caasimada Hirshabelle, waxey sheegayaan in Taliyihii Ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka Buurane uu ku dhintay shil gaari oo galabta ka dhacay magaalada Jowhar.
Shilka gaari oo ka dhacay wadada dheer ee u dhexeysa Garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 4 askari oo ilaalo u eheyd Sarkaalka geeiryooday, Kuwaasoo lagu daweynayo Isbitaalka weyn ee Jowhar, Dhaawaca askarta waxaa la sheegay iney Jajab u badanyihiin.
Saraakiil Ciidan, waxey soo sheegeen in Sarkaalka dhintay uu ka tagay Jowhar, kuna sii jeeday deegaanka Buurane ee hoostagta Degmada Mahadaay, halkaas oo ay ku suganyihiin Ciidankiisa.
Sarkaalka dhintay oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Cali Xuseen, ayaa gacantiis ku waday gaariga Cabdi bilaha ah ee uu shilka kula galay, dadka deegaanka waxey soo sheegeen in Sarkaalka uu ka cabsi qabay qaraxyada wadada dhineceeda lagu aaso.
Dhinaca kalena, warar dheeraad ah waxey ka soo baxayaan qarax miino oo Jowhar lagula eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen Ciidamada Amisom.
Mid kamid ah gawaarida Amisom ayaa la sheegay inuu qaraxa haleelay, uuna jiro khasaare xoogan oo ka dhashay, Ciidanka qaraxa lala eegtay ayaa rasaas hdowr jiho u furay, lama soo sheegin Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Qaraxa.
Kan-xigaGolaha wasiirada oo ka hadlay siyaasa...
Kan-horeXildhibaanada Galmudug oo sheegay ina...
46,614,029 unique visits